Frantsa:Fihetsiketsehana tao Parisy Manohitra ny Fitondrana Jadona ao Gabon · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2011 18:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Shqip, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, English
Ity lahatsoratra ity dia isan'ny tatitray manokana momba ny Korontana ao Gabon 2011.
Gabon ilay firenena kely ao Afrika Andrefana dia nandalo herinandro nafampàna ara-politika, satria governemanta roa – ofisialy sy tsy ofisialy – no samy manambara ho eo amin'ny fitondrana. Ny Alahady 27 Febroary 2011, ilay filoha tsy ofisaly nisora-tena, André Mba Obame, no nandao [fr] ny biraon'ny Sampan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana tao Libreville renivohitra, toerana izay nialokalofany.
Ny andro nialoha io, olona 7000 [fr] no nifamory teny an-dalam-be tao Parisy renivohitra Frantsay mba haneho hevitra ho fanoherana ireo mpitondra jadona Afrikana sy ny governemanta Frantsay nampangaina ho niray tsikombakomba tamin'ireo fiondrana jadona Afrikana.
Niainga tao amin'ny Place de la République ka namonjy ny Ministeran'ny Raharaham-Bahiny Frantsay ireo mpanao fihetsiketsehana, nandalo ny 51 rue de l'Université, izay misy tranobe mitentina 140 tapitrisa Euro an'ingahy Ali Bongo Ondimba (filoha Gabone amin'izao fotoana).
Samy tonga tamin'ilay filaharana daholo na ireo mafana fo Gabone na ireo Libiana.
Filaharan'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny jadona any Afrika mandalo eo akaikin'ny Tranom-bakoka Louvres ao Parisy, Frantsa ny 26 Febroary 2011. Sary avy amin'ny mpanortra.
Mafana fo Gabone manao fihetsiketsehana manohitra ny filoha ofisialin'i Gabon, Ali Bongo, tao Parisy, Frantsa ny 26 Febroary 2011. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Rehefa nandalo teo anoloan'ny tanànan'ny filoha Ali Bogo, niato kely ny filaharana mba hahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana mikiaka ny hoe “Ali Bongo Dégage” (“Ali Bongo ndeha miala any”), araka izay asehon'ity lahatsary tao amin'ny Youtube ity avy amin'i AfricaWeWish: